I-Tron (TRX) izuza iNkxaso yokuThintela kwi-Moonstake phakathi kweBullish Reemergence
8 October 2021 | Ukuhlaziywa: 8 October 2021
Omnye wabanikezeli beenkonzo eziphezulu, i-Moonstake, uxele ukuba abasebenzisi ngoku banokuzibandakanya I-Tron amathokheni kwaye ufumane umvuzo. Inkampani ebambekayo ibhengeze ngoLwesithathu ngokukhutshwa kwemithombo yeendaba, yongeza ukuba i-staking iyafumaneka kwiwebhu kunye neenguqulelo zeselfowuni zenyanga. Ngale nto, abasebenzisi ngoku banokubamba, bathumele, bafumane kwaye babambe i-TRX eqongeni.
Ngokwokukhutshwa ngokusesikweni, i-TRX iye yaba sishumi elinesithathu kwi-cryptocurrency abasebenzisi be-Moonstake abanokuthi babambe. Akukho myalelo uthile, ezinye ezilishumi elinambini zibandakanya iCosmos (ATOM), IRISnet (IRIS), Ontology (ONT), Cardano (ADA), Qtum (QTUM), Polkadot (DOT), Quras (XQC), Centrality (CENNZ), Orbs (ORBS), kunye IOST (IOST). Ngelixa i-staking ifumaneka ngeengqekembe ze-13 kuphela, iqonga lixhasa ngaphezulu kwe-2,000 yexabiso ledijithali.
Iingxelo zibonisa ukuba ukuhambelana kwe-TRX kuza emva kweNyanga yokusebenzisana ne-TRON Foundation ngoJuni kulo nyaka. Oko kwathiwa, obu budlelwane bunokuvelisa iiprojekthi zokudibana. Zombini iinkampani ezinenyawo ezomeleleyo kwicandelo le-DeFi, i-Moonstake iqinisekisile ukuba intsebenziswano iya kuvelisa izinto ezintsha.
Okwangoku, i-TRX iphendule kakuhle kwiindaba, ngeshumi elinesihlanu ngobukhulu be-imali yedatha ethumela + 7% ukwanda.
Amanqanaba aphambili eTron abukela-Okthobha 8
I-TRX / i-USD iphinde yafumana inkqubela phambili ephezulu ngolwesiHlanu kulandela ukudityaniswa kwexesha elide malunga nenkxaso ye- $ 0.09500. Oku kuvela ngokukhawuleza kuza ngasemva kokunyuka kwevolumu yokuthengisa kwi-TRX.
I-TRXUSD-Itshathi yeeyure ezi-4
Oko kwathethi, i-cryptocurrency ayiphendulanga kolu nyuselo lomthamo okwangoku, ebonisa ukuba ukuqhubeka okuqhubayo kusondele kwiiyure ezizayo. Iimeko zokurhweba zikumanqanaba angathathi hlangothi kwi-MACD yethu, ebonisa ukuba kukho indawo yokunyuka okuphezulu.
Nangona kunjalo, abarhwebi banokufumana umngcipheko phakathi kweengxelo ezizayo ze-NFP zase-US ezicwangciselwe kamva namhlanje.
Okwangoku, amanqanaba ethu oxhathiso ayi- $ 0.1000, i- $ 0.1100, kunye ne- $ 0.1150, kwaye amanqanaba enkxaso ayi- $ 0.0950, $ 0.0900, kunye ne- $ 0.0850.
Ukuthengiswa kwemali kwiTron: $ 7.05 billion
Ukulawulwa kweTron: 0.30%
Inqanaba lentengiso: #29
tags Cryptocurrency, iindaba, Uhlalutyo lobuGcisa, TRON, TRX
I-Tron iyabandezeleka Ukuthothisa ukuhla phakathi kuluhlu lweVanEck ETN
24 Septemba 2021 | Ukuhlaziywa: 24 Septemba 2021
I-VanEck ihlala inoburharha ngokutyhala iimveliso zayo ezinxulumene nokutshintshiselana nge-crypto njengoko iqhubela phambili kwiTron ETN yayo ngakumbi kwi-Euronext eParis naseAmsterdam. I-VanEck ikwanazo nee-ETNs eYurophu ezilanda umkhondo wentsebenzo kaSolana kunye nePolkadot kwiJamani iXetra Deutsche Boerse.
Ipotifoliyo yolawulo lotyalo-mali yamazwe ngamazwe elandelela ukusebenza kweeasethi ezahlukeneyo zedijithali iyaqhubeka nokukhula.
Ukunika ingxelo ngophuhliso, Tron Umphathi omkhulu u-Justin Sun uqinisekisile ukuba i-VanEck TRX ETN, enophawu lweticker VTRX, iya kudweliswa kwi-Euronext stock exchange eParis naseAmsterdam. Unyana wongeze wathi: "I-TRX ETN iyaqhubeka nokuthandwa kwaye ixhaswe yimarike ephambili kwilizwe jikelele."
I-CEO yezigidigidi ithi le “Kubalulekile” inyathela ngokuhambelana nokuthotyelwa kweTron kunye nesicwangciso sehlabathi kwaye oku kunokuvumela abatyali mali ukuba bathenge i-TRX "Ngaphandle kwemida kunye nemibundu ephantsi." I-VTRX iya kudlala namhlanje nge-9: 00 CEST.
Ngelixa uVanEck erekhodile impumelelo enkulu ekusunguleni iimveliso ezithengiswa kwamanye amazwe, iinzame zakhe zokukhupha iimveliso ezifanayo e-US ziye zaphikiswa ngabaphathi.
Ifemi ifake izicelo ezininzi kwi-US Securities and Exchange Commission (SEC) yokuphehlelela ingxowa-mali yokurhweba nge-Bitcoin (BTC ETF).
Amanqanaba aphambili eTron abukela-Septemba 24
Uninzi lweshishini le-crypto, i-TRX ibone uxinzelelo olunzima lwe-bearish kwiintsuku ezilithoba ezidlulileyo njengoko iinkunzi zeenkomo ziqhubeka nokubandezeleka. Emva kokubuya okunempilo ukusuka kwindawo eyi- $ 0.0850 ukuya kwi- $ 0.1000 yokumelana nengqondo ngoLwesithathu, i-TRX ijongene nokugatywa okukhulu kwi-bearish tripwire ejikeleze umgca wengqondo. Oku kungafunwa kuthumele i-cryptocurrency engamashumi amabini anesihlanu ngobukhulu kwipateni yokudibanisa phakathi kwe- $ 0.1000 kunye ne- $ 0.0950.
Nangona kunjalo, ngale ntsasa, i-TRX ihlupheke kakhulu kwi-0.0900 yenkxaso, emva kwengozi ebangelwe lushishino ebangelwe yi-Bitcoin (BTC). Oko kwathethi, silindele ukuqhubeka kwe-bearish kwindawo esezantsi ye- $ 0.0800, kulandele ukubuyela okunempilo kwinqanaba le- $ 0.0950 kwakhona.
Okwangoku, amanqanaba ethu oxhathiso ayi- $ 0.0950, i- $ 0.1000, kunye ne- $ 0.1050, kwaye amanqanaba enkxaso ayi- $ 0.0900, $ 0.0850, kunye ne- $ 0.0800.
Imali iyonke yentengiso: $ 1.9 zezigidi
Ukuthengiswa kwemali kwiTron: $ 6.2 billion
Ukulawulwa kweTron: 0.31%
Inqanaba lentengiso: #26
I-TRON yazisa ngeNgxowa-mali yeMidlalo eNtsha phakathi kwamaxabiso asempilweni
Isiseko se-TRON sibhengeze ukuba sisungula ingxowa-mali ye-GameFi, ingxowa-mali ye-TRON Arcade. Inkampani iqaphele ukuba iyakutshona malunga ne-300 yezigidi zeedola kwi-GameFi kunye neeprotokholi ezijolise kwi-NFT eziphuhliswe kwiqonga le-TRON phakathi ngoku ukuya ku-2024.
Kulabo abangaziyo, i-GameFi ligama eligubungela ukwenziwa kwezeMali kunye nokuvela kwemidlalo ye-blockchain-yemveli yokudlala. Ikwachaza iiNFTs, enye yeerival zakutshanje ezisetyenziselwa ukuphawula umculo, ubugcisa bedijithali, kunye nezinye iindlela zomxholo.
I-TRON yenze ingxowa-mali egxile kwi-GameFi nge-APENFT kunye ne-WINKLink kwaye ngokungathandabuzekiyo yenye yezona zinkulu zohlobo lwazo. Ukuthetha malunga nophuhliso, umsunguli we-TRON kunye ne-CEO u-Justin Sun uqaphele ukuba:
“I-GameFi izakuba yinto enkulu elandelayo eyenza i-DeFi, i-NFT, kunye nendawo enkulu ye-crypto ukuba iqondakale kwaye ibandakanyeke […] I-TRON inemincili yokusebenzisana ne-APENFT kunye ne-WINKLink ukwakha i-ecosystem ye-GameFi eyomeleleyo efikelelekayo. kubo bonke. ”
Ukungena kweSiseko kwicandelo leMidlaloFi kuza xa ibhloko yevidiyo esekwe kwi-blockchain ikhulile. I-Axie Infinity, umdlalo wevidiyo osekwe e-Ethereum, yinkokeli elawulayo yecandelo. Iqonga kutshanje libethe i-1 yezigidi ezisebenzayo zabadlali bemihla ngemihla, likhusele i-1.1 yezigidigidi zeedola kwintengiso ye-NFT, kwaye yafikelela kwinqanaba lokuxabisa okuphezulu kwexabiso lentengiso elingaphezulu kwe- $ 3.1 yezigidigidi.
Amanqanaba aphambili eTron abukela-Agasti 13
Le veki ibonakala ngathi iphela ngokuqinisekileyo I-TRON (TRX) kunye nomzi mveliso we crypto. Ukulandela i-rally yale veki, i-TRX inyuke kancinci ngaphezulu kwenqanaba le- $ 0.0900, ngaphambi kokufumana ulungiso olubukhali kwinkxaso ye- $ 0.0800 izolo.
Oko kwathethi, i-cryptocurrency engamashumi amabini anesihlanu ngobukhulu ikwazile ukubamba inkxaso ye-0.0800 yeedola kwaye yalisebenzisa elo nqanaba kwinzuzo yalo njenge-ramp yokunyuka phezulu. Okwangoku, i-TRX isondela kwinkcaso ye- $ 0.0900 kwaye inokuthi ifumane eli nqanaba, isondeze uphawu olubalulekileyo lwe- $ 0.1000. Silindele ukuqhubeka okuqhubayo kwiiyure ezizayo.
Okwangoku, amanqanaba ethu oxhathiso ayi- $ 0.0850, i- $ 0.0820, kunye ne- $ 0.0800, kwaye amanqanaba enkxaso ayi- $ 0.0900, $ 0.0950, kunye ne- $ 0.1000.
Imali iyonke yentengiso: $ 1.94 zezigidi
Ukuthengiswa kwemali kwiTron: $ 6.3 billion
Ukulawulwa kweTron: 0.32%
Inqanaba lentengiso: #25
tags Cryptocurrency, iindaba, Uhlalutyo lweTechnicalaanalysis, TRON, TRX
Inethiwekhi yeTron ibona ukuRekhoda-ukuBala ukuThengwa kweMihla ngemihla
30 Julayi 2021 | Ukuhlaziywa: 30 Julayi 2021
Isiseko seTron, umbutho wokubamba emva kwe I-Tron blockchain, irekhode i-spike engenakuthelekiswa nanto kwimidla yomsebenzisi. Ngokwengxelo yaseburhulumenteni ngeTwitter, umbutho utyhile ukuba inani lokuthengiselana lemihla ngemihla kwinethiwekhi yeTron lichukumise ixesha elitsha ngalo lonke ixesha ngoLwesithathu.
Isixhobo sokubala ukuthengiselana sigada konke ukuthunyelwa kunye nokufumana ukuthengiselana kuzo zonke iiakhawunti ezisebenzayo ze-TRX. Uthungelwano lweTron lurekhodile iitransekshini ezingama-9,298,611 zizonke ngoJulayi 28. Uthungelwano lurekhode ukurhweba okungaphezulu okuphezulu okungama-9,278,050 ngoJulayi 6. I-tweet evela kwisiphatho esisemthethweni se-TRX iqaphele ukuba:
"Inani leentengiselwano zemihla ngemihla kwi #TRON lifikelele kwi-9,298,611 ngoJulayi 28, ebeka irekhodi elitsha liphezulu !!!
#TRON ecosystem ikhule ngokukhawuleza kwaye iyaqhubeka nokwenza iinzame zokwabela iiwebhu indawo. ”
Iingxelo zibonisa ukuba olu phuculo lwe-hawkish lubangelwe zizinto ezimbini. Okokuqala, i-spike yamva nje enomdla kwiiprothokholi ze-GameFi zidlale indima ebalulekileyo kwimisebenzi yenethiwekhi ye-TRX.
Iiprotokholi zeGameFi, ngandlela thile, zidibanisa izibonelelo zemidlalo eyabelweyo, iiprothokholi zeDeFi, kunye neeNFTs. ITron yavela njengeyona ndawo iqhelekileyo yemidlalo eyabelweyo, inzuzo yokungcakaza, kunye nezikim ezinobungozi obuphezulu.
Isitshixo sesibini kukuvuselela okubonakalayo kutshanje kwimarike ye-crypto. Uqingqo lwamaxabiso entengiso lwentengiso lushicilele iinzuzo eziphindwe kabini kwezi ntsuku zimbalwa zidlulileyo.
Amanqanaba aphambili eTron abukela-nge-30 kaJulayi
I-TRX ikwisantya esiphezulu sokuthengisa njengoko imakethi ye-crypto iphinda ibuye ibambe. Oko kwathethileyo, eyona mali inkulu yamashumi amabini anesihlanu ye-cryptocurrency iye yehla ngokukhawuleza kwi-0.0640 yokumelana noMvulo ukuya kwinkxaso ye-0.0566 yeedola.
I-TRX ngoku ikumjikelo wokuphinda uphinde uphinde uxhathise i-0.0640 yeedola njengoko abathengi befumba. Ukusilela ukucoca inqanaba leedola le-0.0640 ngaphezulu kweeyure okanye iintsuku ezizayo kunokuthumela imali ye-imali engezantsi kwenkxaso ye- $ 0.0600, elandelwa yenye into ebuyayo.
Okwangoku, amanqanaba ethu oxhathiso ayi- $ 0.0640, i- $ 0.0650, kunye ne- $ 0.0700, kwaye amanqanaba enkxaso ayi- $ 0.0600, $ 0.0566, kunye ne- $ 0.0500.
Imali iyonke yentengiso: $ 1.54 zezigidi
Ukuthengiswa kwemali kwiTron: $ 4.32 billion
Ukulawulwa kweTron: 0.28%
tags Cryptocurrency, iindaba, TRON, TRX
Uhlalutyo lweNtengiso yeTron: U-Elon Musk ubangela enye into yokuTshitshiswa kweNtengiso
4 Juni 2021 | Ukuhlaziywa: 4 Juni 2021
I-Tron, ecaleni kwayo yonke imakethi ye-crypto, yafumana ingozi enkulu ngolwesiHlanu kulandela ukwaliwa kwinqanaba lokumelana ne- $ 0.0830. Uxinzelelo oluhlaziyiweyo lwe-bearish lubangele ukuba imakethi ye-crypto iwele ngaphezulu kwe- $ 100 yezigidigidi kwiiyure ezimbalwa.
Oko kwaqala iveki yomsebenzi, uTron usebenze kakuhle, njengoko iinkunzi ziphinde zabuya nokuzithemba. I-TRX iprinte usuku lweentsuku ezisixhenxe eziphakamileyo malunga ne- $ 0.0830 kwangoko namhlanje.
Ukuwa kwentengiso kutsha nje kubangelwe yi-tweet evela ku-Elon Musk, eyabhekisa kwi-CEO yokwahlukana kweendlela neBitcoin. Imakethi yeBitcoin iphendule ngogonyamelo kwi-tweet, inikwe impembelelo kaMusk kwi-BTC, irhuqa yonke imarike kunye. I-Bitcoin yehle ngezantsi kweempawu ezingama-36k zeedola ngaphambi kokuthumela isaphulelo esincinci ngaphezulu.
I-Ethereum kunye neBinance Coin khange ihambisane ngcono, neyokuqala yehle ngaphezulu kwe-12% ukusuka izolo izolo kwaye eyokugqibela nge-15%. Ezinye ii-cryptocurrensets ezinkulu zibhale ukwehla okukhulu, ngeCardano, iDogecoin, iRipple, kunye nePolkadot eziwa nge -12.8%, -14%, -12.6%, kunye -13%.
Iingqekembe zemali ezincinci kunye neziphakathi zaphinde zalahlekelwa ngamanani aphindwe kabini emva kwengozi eyenzwe nguMusk.
Amanqanaba aphambili eTron aBonwayo-nge-4 kaJuni
Ukulandela ukwehla okukhulu, iTron ibonakala ngathi iphinde yazinza njengoko iinkunzi zeenkomo ziphinda ziqala imisebenzi yorhwebo. I-cryptocurrency ifumene inkxaso efanelekileyo evela kumgca we-200 SMA phakathi kokuthengisa, kubonisa ukuba eli nqanaba lobugcisa kufuneka lithintele ukuhla kwekamva.
Oko kwathethi, I-TRX iinkunzi zeenkomo kufuneka zithathe imali eyi-cryptocurrency ibuyisele ngaphezulu kwe- $ 0.0800 yokumelana nengqondo ukubuyisela umfutho wokuqina. Nangona kunjalo, ukusilela ukucacisa ukunganyangeki kwangoko nge- $ 0.0780 ngaphezulu kweeyure ezizayo kunokuthumela i-cryptocurrency engamashumi amabini anesihlanu ngobukhulu kudityaniso.
Okwangoku, amanqanaba ethu oxhathiso ayi- $ 0.09000, i- $ 0.1000, kunye ne- $ 0.1100, kwaye amanqanaba enkxaso ayi- $ 0.0700, $ 0.0600, kunye ne- $ 0.0566.
Imali iyonke yentengiso: $ 1.67 zezigidi
Ukuthengiswa kwemali kwiTron: $ 5.55 billion
Ukulawulwa kweTron: 0.33%
Amaqabane eTron kunye neBSCPad yokubonelela ngeLaunchpad yeeProjekthi zeCrypto
28 May 2021 | Ukuhlaziywa: 28 May 2021
I-Tron kutshanje ubhengeze ubuhlakani kunye ne-BSCPad ukwakha iphetshana lokuqala le-IDO kwiTron blockchain.
I-TRONPAD, umanyano wazo zombini ezi nkampani, iya kunika abathengisi ukuvezwa ngokulinganayo kuphehlelelo lweprojekthi entsha kunye nengeniso ngaphakathi kwendalo yeTron. Kwangelo xesha, ezi projekthi zintsha ziya kukhusela inkxaso-mali kwintengiso yethokheni kwaye ziqokelele umfutho wokumiliselwa ngempumelelo kwinethiwekhi.
I-BSCPad, ebonakalise ukusebenza kwayo kunye neeprojekthi ezinje (umzekelo ukwazisa iprojekthi ye-IDO), iqaphele ukuba iya kuboleka inkxaso kunye nobungcali bayo ngokupheleleyo kwinethiwekhi yeTron. I-BSCPad, esungulwe nge-Matshi 2021, ijolise kwimizamo yayo yokulungiselela iiprojekthi ezintsha zokuphehlelelwa kwi-Binance Smart Chain. I-BSC irekhode ngaphezulu kwe-21 yezigidi zeewallets ezivulwa ngexesha elinye iBSCPad yeza kwi-intanethi.
UJustin Sun, umseki weTron kunye ne-CEO yeBitTorrent, uphawule malunga nentsebenziswano entsha, esithi:
“Iqela leBSCPad lomelele kakhulu kwaye linolwazi. Ziquka abanye babadlali abaphezulu kwisithuba. Sijonge phambili ekuthatheni le ntsebenziswano iye kwiindawo ezintsha. ”
Ilanga longeze ukuba:
"Njengokuba ukwamkelwa kwe-crypto kuqhubeka ukuqhuma, i-TRONPAD iyakusebenza njengeqonga elifanelekileyo le-IDO yeeprojekthi ezazisa nge-TRON blockchain."
Amanqanaba aphambili eTron aBonwayo-ngoMeyi 28
Njengoko intengiso ye-cryptocurrency iqhubeka ngamandla, i-TRX iwele kumjikelo osecaleni kwinqanaba le- $ 0.0800.
Nangona kunjalo, i-cryptocurrency engamashumi amabini anesine ngobukhulu iye yatyibilika ngaphantsi koluhlu lokudityaniswa kwezi yure zimbalwa zidlulileyo njengoko iibhere ziqinisa iinzame zazo. Oko kwathethi, iinkunzi zenkomo kufuneka zibambe umhlaba ngaphezulu kwe- $ 0.0700 yenkxaso kwaye iququzelele ukunyuka ngaphezulu kwe-200 SMA kwiiyure ezizayo, ukuthintela lo mzamo ziibhere.
Ukuthengiswa kwemali kwiTron: $ 5.1 billion
Inqanaba lentengiso: #24
tags BSCPad, Cryptocurrency, iindaba, TRON, TRX
Uhlalutyo lweNtengiso yeTron-Meyi 21
21 May 2021 | Ukuhlaziywa: 21 May 2021
Iintsuku ezimbalwa ezidlulileyo khange kube yinto emfutshane yokungahambi kakuhle I-Tron kunye nentengiso eseleyo ye-cryptocurrency. Ukuwa kwemarike kule veki kubangelwe ngurhulumente waseTshayina wokuchasana ne-crypto stance reiteration edityaniswe ne-bearish ephantsi yesibhengezo seTesla kwiveki ephelileyo.
Imeko yentengiso ebambekayo iye yanda ngoLwesithathu kulandela ukurhweba kwizikhundla eziphezulu.
Oko kwathethi, intengiso ye-crypto yentengiso ibonakala ngathi ayihlali. Ngexesha lokushicilela, ixabiso elipheleleyo lemarike ye-cryptocurrency yehle nge-7.46%, ngelixa i-TRX ithengisa -10% ngosuku. Ngaphezulu kweentsuku ezisixhenxe, i-cryptocurrency engamashumi amabini anesithathu ngobukhulu yehle nge-39%.
Ngeli xesha, i-Bitcoin ikwathengisa ngaphandle kwethamsanqa, njengoko i-cryptocurrency ebekiweyo iqale kwakhona ukwehla ukuya kwi-36k yemakethi namhlanje kwaye yehla nge-30k yeedola kwingozi yangoLwesithathu.
Ezinye iicryptos ezinkulu zifumene ilahleko enkulu, kunye ne-Ethereum kunye neBinance Coin eyehla kwiiveki ezininzi ngoLwesithathu kwi- $ 1,850 nakwi- $ 230 ngokwahlukeneyo.
Ngexesha lokushicilela, i-Ethereum, iBinance Coin, iCardano, iRipple, iDogecoin, iPolkadot, kunye neKhompyuter ye-Intanethi zonke zinokuhla kwamanani aphindwe kabini nge -10%, -14%, -13%, -12%, -11%, -18% , kunye -13%, ngokwahlukeneyo.
Oko kwathethi, ii-cryptocurrensets eziphakathi kunye nezisezantsi azilunganga nangayiphi na indlela.
Ngokugqibezelayo, ikepusi yentengiso eqokelelweyo yemakethi ye-cryptocurrency ime kwi-1.61 yezigidigidi zeedola, emva kokufakwa kwi-1.45 yezigidi zeedola ngoLwesithathu.
Amanqanaba aphambili eTron aBonwayo-ngoMeyi 21
Emva kokudityaniswa okungaphantsi koxinzelelo lwe- $ 0.0900 kuninzi lwanamhlanje, iTron iwele ngaphantsi komgca we-0.0800 njengeebhere zihlala zingayeki. I-cryptocurrency okwangoku ithengisa kunye nejelo elihlayo ukuya kwi-0.0700 yeedola ezisezantsi.
Ngenxa yokuba indlela yokunganyangeki iphantsi, kufuneka silindele ukwehla okongeziweyo kwixabiso le-TRX kwiiyure ezizayo.
Oko kwathiwa, ukuwa kwi-0.0700 ye-dollar inkxaso iya kunceda iTron ibuyele ngokukhawuleza kwinqanaba le-0.1000.
Ukuthengiswa kwemali kwiTron: $ 5.4 billion
Ukulawulwa kweTron: 0.35%
Inqanaba lentengiso: #21
I-USDT ikhutshwe kwiTron Crosses 30 Billion
14 May 2021 | Ukuhlaziywa: 14 May 2021
UJustin Sun, umseki weTron, ubhengeze ukuba inani elipheleleyo le-stalcoin enkulu kwimarike yeTether ekhutshwe njengeethokheni ze-TRC20 I-Tron I-blockchain ifikelele kumthamo we-30.9 yezigidigidi zeedola. Eli linikwe elona nani liphezulu le-solidcoin ekhutshwe kuyo nayiphi na i-blockchain kwimbali.
Ilanga livakalise uphuhliso lwamva nje nge-Twitter izolo, apho lavuyisana neqela leTron ngokususa le nto ibalulekileyo.
Ngokwedatha evela kwiwebhusayithi kaTether, kukho malunga ne-60 yezigidigidi zeedola ekujikelezeni, kunye neTron njengeyona ndawo iphambili yokubamba ibhloko. I-Ethereum ithatha indawo yesibini malunga ne-27 yezigidigidi zeedola ekhutshwe njengeethokheni ze-ERC20. U-Omni, umthetho olandelwayo we-Bitcoin, uza kwindawo yesithathu malunga ne-USDT yezigidigidi kwi-blockchain yayo. Kwindawo yesine yi-Solana blockchain, ene-200 yezigidi zeedola kuyo.
Iingxelo zibonisa ukuba ukukhutshwa kweTether kuye kwanda kakhulu ukusukela oko kwaqala intengiso yenkunzi. I-Glassnode ityhile ukuba i-USDT isuke kwi-10 yezigidigidi ngo-Agasti 2020 yaya kuthi ga kwi-60 yezigidigidi ukusukela namhlanje.
I-Tether yaqala ukusebenza kwi-Tron ngo-Epreli 2019 kodwa yasilela ukufumana ukwamkelwa okukhulu kude kube yi-2021, xa kwathatha isuntswana elikhulu lokuxabiseka kweemarike e-Ethereum. Abasebenzisi beCrypto batsalelekile kwinguqulelo yeTron yeTether emva kokufumanisa ukuba imicimbi iphantse yasimahla kwaye yangoko nangoko.
Amanqanaba aphambili eTron aBonwayo-ngoMeyi 14
I-TRX ithengise phantsi koxinzelelo olusezantsi ngaphezulu kweentsuku ezisixhenxe, kulandela i-rally ebukhali kwinqanaba le-0.1700. I-cryptocurrency engamashumi amabini ananye ngobukhulu ngoku ithengisa kunye nejelo elihlayo ukuya kwinqanaba le- $ 0.1100. Ngexesha lokushicilela, uTron ulwa nomphezulu wejelo (i-0.1280 yeedola) ukubuyisa amandla okunyusa emva kwengozi yentengiso yakutshanje.
Ikhefu elingaphezulu kokuxhathisa kwe- $ 0.13000 inokunceda ukuba i-cryptocurrency iphinde iphinde ibuye. Nangona kunjalo, ukusilela ukucoca ijelo le-bearish kwiiyure ezizayo kungathumela i-TRX kwinkxaso yeedola eziyi-0.12000 kunye nezantsi.
Okwangoku, amanqanaba ethu oxhathiso ayi- $ 0.1300, i- $ 0.1400, kunye ne- $ 0.14950, kwaye amanqanaba enkxaso ayi- $ 0.12000, $ 0.1100, kunye ne- $ 0.1000.
Imali iyonke yentengiso: $ 2.31 zezigidi
Imali eyintloko yentengiso yeTRON: $ 9 billion
I-Tron Blockchain ivula i-CryptoPunk Lookalike, iTpunks
7 May 2021 | Ukuhlaziywa: 7 May 2021
Njengokuba i-Ethereum ine-CryptoPunks njenge-NFT yayo yokuqala yokuqokelelwa kwidijithali, I-Tron blockchain ibhengeze iiTpunks. Kwi-1000 TRX kuphela, abasebenzisi ngoku banokuyila enye yeeMFTs zokuqala kwiTron.
Ukukhutshwa kweTpunks kweza nefriji yesiqhelo. Kanye njengokukhutshwa kweBinance Punks kwiBinance Smart Chain, iiTpunks zisebenzisa iiasethi ezivela kwingqokelela ye-CryptoPunks yoqobo. Ngelixa abanye bebanga ukuba ukukhutshwa kweTpunks kugcwele ukukopa, abanye bathi le projekthi yongeza ixabiso kunye nokuba semthethweni kwiipunks zokuqala kwi-Ethereum blockchain.
IiTpunks ziphuhliswa njengethokheni ye-TRC-721, umgangatho osemtsha wethokheni osandula ukwenziwa weeNFTs kwiTron blockchain. Iingxelo zibonisa ukuba iTron ikhuphe iithokheni ezili-10,000 zeTpunk, njengeCryptoPunks yoqobo. Amathokheni amatsha aquka abaphambukeli abasithoba, iinkawu ezingamashumi amabini anesine, iiZombi ezingamashumi asibhozo anesibhozo, iiJustin ezilishumi elinanye, kunye nabanye abalinganiswa.
NgoDisemba kunyaka ophelileyo, uTron wabhengeza umgangatho wokuqala wamathokheni angabonakaliyo, i-TRC-721, ephawula ukuba zonke iithokheni ziya kwahluka. Ukudala ujongano oluqhelekileyo kuvumela usetyenziso ukuba lubeke esweni kwaye ludlulise ii-NFT kwinethiwekhi yeTron.
I-NFTs, nakweyiphi na i-blockchain, iqulathe i-ID yomnini, imethadatha etyebileyo, amakhonkco efayile akhuselekileyo kunye nolunye ulwazi lokuchonga. Lonke olu lwazi lurekhodwe kwisivumelwano seethokheni, esenza ukuba i-NFT nganye yahluke.
Amanqanaba aphambili e-TRX ukuba abukele-ngoMeyi 7
Ukulandela ukudityaniswa kwayo ixesha elide phakathi kwe- $ 0.1350 kunye ne-0.1175 yeedola, i-TRX iye yaqhekeka yaya kwi-bullish yokwenyuka ukuya kumaxesha ayo apheleleyo aphezulu kwi-0.1808 yeedola. I-cryptocurrency yesixhenxe ngobukhulu ithengisa ngakwisitishi esinyukayo kodwa ngoku ilwela ukuhlala ngaphezulu kwe- $ 0.16 yenkxaso yezengqondo.
Oko kwathethi, silindele ukubona ukubuya kwenkxaso ye-0.16 yeedola kwinqanaba le-0.17 yeedola kwiiyure ezizayo. Oko kwathethi, ukudipha kwixabiso langoku kufuneka ufumane inkxaso eyongezelelweyo kwinkxaso yeedola eziyi-0.1560.
Okwangoku, amanqanaba ethu oxhathiso ayi- $ 0.1650, i- $ 0.1700, kunye ne- $ 0.1750, kwaye amanqanaba enkxaso ayi- $ 0.1550, $ 0.1500, kunye ne- $ 0.1450.
Imali iyonke yentengiso: $ 2.37 zezigidi
Imali eyintloko yentengiso yeTRON: $ 11.7 billion
Inqanaba lentengiso: #17
I-econstem yeTron ibona ukukhula okuMandla njenge-UME kunye nokuTshintshana kwezeNtlalontle ukufumana ukuDuma
30 April 2021 | Ukuhlaziywa: 30 April 2021
UME kunye nokuTshintshiselana ngezeNtlalontle, iiDapps ezimbini ezidumileyo kwifayile ye- I-Tron blockchain, kuthiwa banegalelo elikhulu ekukhuleni okukhulu okubonwe kwinethiwekhi kwezi veki zidlulileyo. Ezi zicelo zisasazwayo zezona zikhethwa kakhulu phakathi kwabasebenzisi beTron, ngaphandle kwemali yabo ephezulu yegesi.
Ngokwengxelo ye-DappRadar, i-UME ithumele ukukhula kwe-210% kwimicimbi yemihla ngemihla, ngelixa iSocialSwap inyuse isiseko sayo somsebenzisi ngaphezulu kwe-60% kwiveki ephelileyo iyodwa.
UTron ebekwishishini ixesha elingaphezulu konyaka kwaye unexabiso elipheleleyo eliValiweyo (TVL) le- $ 10 yezigidigidi. I-Tron blockchain inikezela abasebenzisi ngokukhawuleza kunye nokuthengiselana ngexabiso eliphantsi, indibaniselwano enomtsalane kakhulu yabangenayo abatsha kwishishini le-crypto. Kwinyanga ephelileyo, iTron irekhode ukwanda kwe-210% kwintengiselwano, ukwanda nge-16% kwisiseko somsebenzisi, nangaphezulu kwe-500% yokunyuka kwevolumu yokuthengisa.
I-UME luphawu lolawulo lobunini boTshintshiselwano lotshintshiselwano olusemthethweni (DEX) kwinethiwekhi yeTron. Abasebenzisi banokuthi babambe kwaye bafumane i-UME kwinethiwekhi yeTron, kwaye inikezela ngesango lokungena kwi-Uswap. Esinye sezizathu ezibangele ukuba i-Uswap inyuse kukuthatha inxaxheba kwayo kutshanje kwi-DeFi hackathon ebibanjelwe ngumseki weTron u-Justin Sun ekuqaleni kwale nyanga. Iprojekthi yeza kwindawo yesibini.
Okwangoku, i-Uswap inendawo yentengiso ye-NFT ecwangciselwe ukumiliselwa kwiveki ephelileyo yenyanga. Olu phuhliso luthetha ukuba iTron ingazibandakanya kwishishini leNFT kungekudala.
Amanqanaba aphambili e-TRX ukuba abukele-Epreli 30
Ukulandela isaphulelo sayo senkxaso ye- $ 0.095, iTron ibonakala ngathi iwele kudityaniso olungezantsi kwe- $ 0.1250 yokumelana. Nangona kunjalo, i-cryptocurrency inokuwaphula i-0.1250- $ 0.1300 yokuchasana nendawo kwiiyure ezizayo, ezinokubangela ukuqala kwakhona kwirali yenkomo.
Oko kwathiwa, ukungaphumeleli ukukala ukuxhathisa kwangoko kunokugcina i-TRX ikwinqanaba elisecaleni kwimpelaveki.
Okwangoku, amanqanaba ethu oxhathiso ayi- $ 0.1250, i- $ 0.1300, kunye ne- $ 0.1350, kwaye amanqanaba enkxaso ayi- $ 0.1200, $ 0.1150, kunye ne- $ 0.1100.
Imali iyonke yentengiso: $ 2.12 zezigidi
Imali eyintloko yentengiso yeTRON: $ 8.9 billion
Tron Dominance: 0.42%
Inqanaba lentengiso: #19